Toamasina Vazahalahy matin’ny fanafody mampihenjana filahiana
Antananarivo madio sy milamina no tanjona Nesorina avy hatrany ireo mpandoto tanàna
Araka ny vinan’ny ben’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra Lalao Ravalomanana : “Antananarivo Soa Iombonan’ny Malagasy”, dia niara-nisalahy avokoa ireo hery velona rehetra teo anivon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA) nanomboka tamin’ity herinandro ity,
Besarety niova endrika Misy manangana tsena sahady amin’ny sisin-dalana
Tsikaritra tato ho ato fa efa misy manomboka manangana tsena ny sisin-dalana eny Besarety na dia tsy mbola miverina amin’ny laonina akory aza ny fifamoivoizana, ary tena miditra ao anaty arabe rah any fahitana ilay izy.
Sefo fokontany sy ny mpitam-bola ary ny mpitantsoratra 8 volana tsy nandray tambin-karama
Mitaraina ny ankamaroan’ireo sefo fokontany sy ny lefiny ary ny fikambanan’ny mpitantsoratra sy ny mpitambola na ny ATS “Association Trésorier Sécretaire”, noho ny tsy fandraisan’izy ireo ny tambin-karama amin’izao.
Antananarivo Renivohitra Hafindra eny Isotry avokoa ireo tsy manan-kialofana
Ho fanadiovana ny tanàna mialoha ny hahatongavan’i Papa François eto an-tanindrazana amin’ny fiandohan’ny volana septambra ho avy io dia nisy ny hetsika notanterahin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra tamin’ireo tsy manan-kialofana, omaly.
Fampinonoan-dreny Mamonjy aina miisa 800.000 isan-taona
Araka ny fantatra dia ahafahana mamonjy aina miisa 800.000 isan-taona ny fampinonoan-dreny tsy misy fangarony, ka zaza latsaky ny enim-bolana ny ankamaroan'ireo.
BORIBORINTANY VOALOHANY Nodiovina ny tanàna
Norarahana fanafody famonoana bibikely iadiana amin’ny otrikaretina avokoa rehefa voadio ny ankamaroan’ireo tanàna tao amin’ny Boriborintany voalohany, omaly.
Ambohibarikely Paraky Raim-pianakaviana iray maty voatsatok’antsy
Raim-pianakaviana iray manodidina ny 50 taona omaly maraina no efa hitan-janany nitsitra tsy nisy fofon’aina intsony tetsy amin’ny tranompatin’ny hopitaly HJRA Ampefiloha.
Vazahalahy iray manodidina ny 77 taona no hita faty, tao amina hotely iray ao Morafeno Toamasina ny sabotsy 25 mey lasa teo.
Ireo mpanadio trano tao amin’ilay hotely no nahita ny vatana mangatsiakany izay efa takon-kenatra fotsiny sisa no teny an-kodiny ary mbola teo am-pandriana. Teratany Belza efa misotro ronono izy io ary efa mpivantana matetika ao. Raha ny fantatra, teo am-pandriana sy teny an-tanany ny fanafody nohaniny, izay karazany mampihenjana filahiana, raha ny filazan’ny dokotera avy eo amin’ny BMH, nizaha ny razana. Efa nalain’ireo teratany Belza namany hafa ny razana, hatramin’ny fotoana nanoratanay.